ကြော်ငြာနံပါတ် S-10146040 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မရမ္းကုန္း ၈ မိုင္ ေပါက္ေစတီ ေၿမညီတိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10145987 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10142426 အတွက် Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မရမ်းကုန်း ကမ္ဘာအေးဂမုန်းပွင့်အနီးမှ ဒုတိယထပ် တိုက်ခန်း
885 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10140838 အတွက် Myanmar Ray Real Estate Agency သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သမိုင်းမြို့သစ် ၃ လမ်း တိုက်ခန်းပထမထပ် ရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10139920 အတွက် အာရှ အကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သမိုင်းမြို့ဟောင်း ၅လမ်း တိုက်ခန်း ၃လွှာရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10139405 အတွက် အာရှ အကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🙏🙏🙏...မရမ်းကုန်း(5)ရပ်ကွက် အိမ်ရာဝန်းတွင် ဘဏ်ချိတ်ရ အသင့်ပြင်ဆင်ထားသောတိုက်ခန်းကျယ် ရောင်းပါမည်...🙏🙏🙏...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10139324 အတွက် Aung Ta Khit Real Estate Service. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (၈) မိုင်တွင် ကုမ္ပဏီ/ ရုံးခန်းဖွင့်ရန် မိသားစုနေထိုင်ရန် သင့်တော်သော မြေညီ+ထပ်ခိုးတစ်ဝက်ပါ တိုက်ခန်းအရောင်း။...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10137142 အတွက် လဝန်းရှင် အိမ်ခြံမြေ ဝန်ဆောင်မူလုပ်ငန်း သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10136000 အတွက် အင်ကြင်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
နေရာ ကောင်း အိမ်ရာဝင်း ရှိတိုက် ခန်းကျယ် ရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10134771 အတွက် ရွှေမြင့်မိုရ် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်